Dingana lehibe folo any Nouvelle Zélande
Capital Capital of the World - Nouvelle Zélande
Nouvelle-Zélande dia paradisa amin'ny fitsangantsanganana sy fitsangatsanganana, ny Dia an-tongotra 10 mahafinaritra tena manampy ny solontenan'ny tontolo iainana sy ny fonenana voajanahary isan-karazany ao amin'ny firenena. Ny diabe dia mandrakotra ny iray / ampahatelon'ny velarantanin'i Nouvelle-Zélande, izay izy ihany no mamintina ny antony mahatonga ny firenena ho renivohitra mandeha an'izao tontolo izao. The ny fitsangatsanganana no fomba tsara indrindra hiainana ny kolontsainy, tontolo iainana ary ny zavamaniry sy ny biby. Io no fandosirana mety indrindra sy mampiadana indrindra amin'ny fiainana an-tanàna.
Ireo dia tantanina be ary tantanina tsara nataon'ny departemantan'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tongotra an-tongotra dia azo raisina amin'ny alàlan'ny tari-dalana na tsy misy tari-dalana fa mitaky famandrihana mialoha satria malaza izy ireo ary tsy olona maro no mahazo mandray azy ireo indray mandeha. Ny fanitsakitsahana na dia fitsangatsanganana iray aza dia manome anao fahatsapana fitoniana, fahombiazana ary ny fomba tsara indrindra hijerena ny backcountry any New Zealand.
Aza hadino ny mikaroka ny lafiny rehetra amin'ny làlana alohan'ny hiainganao, manomboka amin'ny toetr'andro, sakafo, trano ary fitafiana ary raha mila fampahalalana amin'ny diabe dia azonao atao ny misintona ny Great Hikes App ho an'ireo mpampiasa android sy ny Great Hikes an'ny NZ ho an'ireo mpampiasa iOS.
Visa any Nouvelle Zélande
Governemanta any Nouvelle Zélande no nanatsotra ny New Zealand Visa dingana ho an'ny mpitsidika. Afaka mahazo a TouristVisa ho an'i Nouvelle Zélande noho ny fitsidihanao any Nouvelle-Zélande amin'ny maha mpizahatany anao, mpitsidika anao na amin'ny ankapobeny amin'ny antony hafa, avy amin'ny fahafaha-manaon'ny tranonao. Mba hahazoana a New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA). Nouvelle Zélande dia manana karazana Visa izay ny tsotra indrindra dia ny New Zealand eTA izay raisina amin'ny alàlan'ny mailaka raha toa ka mampihatra eto amin'ny Forma Application eTA New Zealand ofisialy.
Afaka mahazo an Visa any Nouvelle Zélande maika avy amin'ity tranonkala ity raha sanatria maika ny dia ataonao.
1. Farihy Waikaremoana
46 km amin'ny lalana iray, 3-5 andro, làlana manelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano fandoavana karama dimy na toby maro eny an-dàlana.
Ity lalana ity dia manaraka ny Farihin'i Waikaremoana izay manana anaram-bositra hoe 'ranomasina misamboaravoara' izay eo amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy avaratra. Teny an-dalana dia hihaona amoron-dranomasina mahafinaritra sy mitokana ianao ary ny riandranon'i Korokoro izay mendrika ny lalana tokoa. Ireo tetezana mihantona avo alehananao mandritra ny làlana dia hiantoka ny traikefa nahafinaritra anao. Ny faritra dia arovan'ny vahoakan'i Tuhoe akaiky izay hahita anao topy maso ny ala tropikaly ary efa manan-tantara talohan'ny nahatongavan'ireo mpifindra monina eropeana teto amin'ny firenena. Ny masoandro nojerena avy any amin'ny blaogy Panekire sy ilay 'ala goblin' mahagaga dia mahatonga an'ity diabe ity hanana traikefa manankarena. Ankoatry ny fiakarana mideza mankany amin'ny blonts Panekire dia miala sasatra ny sisa amin'ny diany.
Tsy làlan'ny fizaran-tany ity ka mila manamboatra ny fandaminana amin'ny fitaterana hatrany am-piandohan'ny làlana ary hatramin'ny faran'ny diabe. 1 adiny 30 minitra avy eo Gisborne ary 40 minitra avy eo Wairoa.
2. Boriboritany Avaratra Tongariro
43 km (loop), 3-4 andro, Lalan'ny mpanelanelana
Fonenana - Mijanona eo amin'ny isan'ny trano bongo / tobim-bahiny any an-dàlana eny an-dalana.
Ny fitsangatsanganana dia lalan'ny loop izay manomboka ary mifarana eo am-pototry ny Tendrombohitra Ruapehu. Ny votoatin'ny fiakarana dia mitondra anao any amin'ny faritra volkano amin'ny lova an'izao tontolo izao Valan-javaboary Tongariro, mandritra ny lalana dia ahitanao fahitana mahavariana amin'ireo tendrombohitra roa Tongariro sy Ngauruhoe. Ny fahasamihafana eo amin'ny tontolo voajanahary dia misy fiatraikany lehibe amin'ireo mpandeha an-tongotra amin'ity lalana ity, manomboka amin'ny tany mena, loharano mafana, tampon'ny volkano ka hatrany amin'ny lohasaha misy glasy, farihy turkise, ary kijana Alpine. Ny diabe dia tokony ho ao anaty lisitry ny siny ho an'ny mpankafy Lord of the Rings satria ny Mt Doom malaza dia azo zahana amin'ity fitsangatsanganana ity. Ny fotoana mety indrindra handehanana an-tongotra dia ny faran'ny volana oktobra hatramin'ny faran'ny aprily noho ny haavon'ny fiakarana sy ny toetrandro any amin'ny faritra.
Raha te hanana traikefa fohy amin'ilay dia ianao dia afaka mandeha amin'ny diabe 'tsara indrindra' any Nouvelle-Zélande miampita ny fiampitana Tongariro izay manodidina ny 19kms.
Ny toerana dia 40 minitra avy eo Turangi ary 1 ora 20 minitra avy any Taupo.
3. Fitsangatsanganana any Whanganui
Fitsangatsanganana iray manontolo 145 km, 4-5 andro, Paddling
Fonenana - Misy trano bongo roa alina - ny iray amin'izany dia Tieke Kainga (iray ihany koa ny marae) sy ny tobin'ny toby
Ity dia ity dia tsy dia an-tongotra, fa fikatsahana izay handresena ny renirano Whanganui amin'ny lakana na kayak. Misy safidy roa azo atao, ny dia manontolo 145km na ny dia lavitra 3 andro avy any Whakahoro mankany Pipiriki. Ny dia manolotra traikefa nahafinaritra adrenaline avo lenta rehefa mamakivaky riaka, riandrano ary rano marivo ianao. Ny fialan-tsasatra tsara indrindra azonao raisina eny an-dalana dia eo am-pikarohana ny 'Bridge to Nowhere' izay tetezana nilaozana.
Izany dia tsy mahazatra Fandehanana tsara, fa fanandramana mendrika raha mankafy anaty rano ianao ary te-hivezivezy amin'ny alàlan'ny renirano iray. Ny fotoana mety indrindra handehanana amin'ity dia lakana farany ity dia avy amin'ny voalohan'ny volana novambra ka hatramin'ny aprily.
The teboka fanombohana Taumarunui dia adiny 2 miala an'i Whanganui ary azo aleha avy any Ruapehu.
4. Làlan'ny morontsiraka Abel Tasman Coast
60 km, 3-5 andro, Làlana manelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano bongo sy toby fialofana any an-dàlana. Misy ihany koa ny safidy hijanonana ao amin'ny lodge.
Ny valan-javaboahary Tasman Park no misy an'io làlana mahafinaritra io, eo afovoan'ny dia ny morontsiraka fotsifotsy tsara tarehy, ny lohasaha madio mangarahara miaraka amin'ny lohasaha harambato. Ny toerana main-tany any Nouvelle-Zélande dia manolotra ny fitsangantsanganana amoron-tsiraka any Nouvelle-Zélande. Ny ampahany mahavariana indrindra amin'ilay lalana dia ny tetezana mihantona maharitra 47 metatra izay mitondra anao mankany amin'ny Reniranon'i Falls. Teny an-dàlana, azonao atao ihany koa ny Kayak na mandray taxi amin'ny rano hiaina sy hankafy ny toerana amoron-tsiraka. Azonao atao ihany koa ny mandeha an-tongotra an-tongotra iray andro mba hahazoana traikefa fohy amin'ity làlana ity.
Araka ny ambany ny haavon'ny fahasahiranana amin'ity dia ity, atoro hevitra ny raiso ho toy ny fiankinan-doha amin'ny fianakaviana ary ny làlana manolotra toby fitobiana tsara indrindra eny amoron-dranomasina.
40 minitra avy eo Nelson ny valan-javaboary. Ny ampahany tsara indrindra amin'ity làlana ity dia ny làlan'ny fizaran-taona rehetra ary tsy misy fetran'ny fizaran-taona.
Lemaka amoron-tsirak'i Abel Tasman
5. Lalana mavesa-danja
Manodidina ny 78km, 4-6 andro, làlana manelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano fonenana fito misy valiny / toby sivy eny an-dalana
Ity dia ity dia miorina amin'ny faritra lavitra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy atsimo ao amin'ny valan-javaboary Kahurangi. Manolotra anao ny làlana a fahitana tsara ny reniranon'i Heaphy rehefa mamakivaky ny tany mando sy tendrombohitra ary morontsiraka andrefana ianao. Azo zahana mandritra ny taona ny lalana fa somary sarotra ny fiakarana mandritra ny ririnina. Ity fitsangatsanganana ity dia natao ho an'ireo tia natiora satria ny habetsaky ny bibidia sy ny biby hitanao eto dia tsy azo ovaina, manomboka amin'ny ala palmie, moss maitso maitso, ary kirihitra mankany amin'ny vorona kiwi lehibe, sifotra karnivora ary takahe.
Ity toerana ity dia tsara ho an'ny mpankafy bisikileta ihany koa satria ny lalana bisikileta dia manome traikefa nahafinaritra amin'ny alàlan'ny ala sy fiakarana an-tampon'ny tendrombohitra.
Ny valan-javaboary dia 1 adiny 10 minitra avy eo Westport ary adiny 1 miala an'i Takaka.
Tetezana fampiatoana amin'ny lalan'i Heaphy
Fampahatsiahivana hahazoana New Zealand eTA na New Zealand Visa
Raha mikasa ny hitsidika any Nouvelle-Zélande ianao ho mpizahatany, mpitsidika na amin'ny ankapobeny noho ny antony hafa, aza adino ny mahazo New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA). izany New Zealand ETA dia tombony manokana ho an'ireo mpitsidika firenena 60 izay tsy mila intsony Visa mpizahatany any Nouvelle-Zélande izay mandany fotoana. Ny New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA) azo ampiharina momba izany tranonkala ary vita tao anatin'ny 2 minitra. Governemanta New Zealand dia namela an'i New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA) hatramin'ny taona 2019.
Ary koa, raha tonga amin'ny Cruise Ship ianao dia azonao atao ny mangataka amin'ny New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA) na inona na inona firenena niavianao, amin'ny teny hafa na iza na iza avy amin'ny firenena rehetra dia afaka mangataka New Zealand ETA (New Zealand Electronic Travel Authority na NZeTA) na inona na inona firenenao, raha ho avy Fomba fitsangatsanganana an-tsambo . Azonao atao ny manamarina ny Ireo karazana Visa New Zealand raha mila fanazavana fanampiny momba ny karazana Visa any Nouvelle Zélande na New Zealand eTA.
6. Paparoa track
Manodidina ny 55km, 2-3 andro, làlana manelanelana
Fonenana- Mijanona ao amin'ireo trano fonenana telo karama, voarara ny lasy ao anatin'ny 500m amin'ny làlana ary tsy misy tobim-pilasiana.
Ao amin'ny Valan-javaboarin'i Fiordland any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Ity dia làlana vaovao izay nosokafana tamin'ny mpandeha an-tongotra sy bisikileta an-tendrombohitra tamin'ny faran'ny taona 2019 fotsiny dia noforonina ho fahatsiarovana ireo 29 ​​lahy izay maty tao amin'ny Pike River Mine. Teny an-dàlana, raha miakatra ny tandavan-tany Paparoa ianao dia hitarika mankany amin'ny toerana misy ny fitrandrahana taloha. Ny valan-javaboary sy ny làlambe dia mamela anao hijery ireo faritra mitovy amin'ny vatosokay toy ny valan-javaboary Jurassic, ny ala ary ala mando taloha, ary ny fomba mahavariana avy any amin'ny tandavan-tany Paparoa.
Ilay valan-javaboary dia Fiara adiny 8 avy eo Queenstown ary fiara 10 ora miala an'i Te Anau. Ny fotoana mety indrindra handehanana an-tongotra dia ny faran'ny volana oktobra hatramin'ny faran'ny aprily.
7. Routeburn lalana
32km lalana iray, 2-4 andro, làlana manelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano fonenana efatra misy valiny / toby roa
ny miorina amin'ny faritra Otago sy Fiordland tsara tarehy ary nisafidy ny maro ny lalana hidirana ao amin'ny valan-javaboary Fiordland mandritra ny diany mamakivaky ny tendrombohitra. Valam-pirenena Aspiring. Ity làlana ity dia ho an'ireo izay te hanana traikefa amin'ny maha-eo an-tampon'izao tontolo izao satria ny làlana dia mitaky fiakarana làlana alpine miaraka amin'ny fahitana any an-tendrombohitra tsara indrindra. Ny làlana dia tsara tarehy avy amin'ny làlana roa tonta, toy ny avy amin'ny lalana iray, ny renirano Routeburn miavaka dia mitarika ny dianao mankany amin'ny lemaka alpine sy amin'ny lalana hafa izay iakaranao mankany amin'ny Fihaonana an-tampony lehibe any Fiordland Manolotra fomba fijery mahavariana momba an'i Fiordland. Mandritra ny làlana rehetra, ireo lohasaha misy glasy sy farihy mijoalajoala (Harris) izay mandravaka ny lalana dia hahatonga anao ho talanjona amin'ny hatsaran'ny lalana.
Ny fotoana mety indrindra hanaovana an'io dia io dia avy amin'ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny faran'ny volana aprily ary maharitra 45 minitra avy eo Queenstown ary adiny iray miala an'i Te Anau.
Ny fahitana raha eo amin'ny làlan'ny Routeburn
Fonenana - Mijanona ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny telo tantanan'ny DOC (Sampan-draharahan'ny Fiarovana) sy ireo trano fandraisam-bahiny telo satria tsy misy tobim-pilasiana ary voarara ny mitoby ao anatin'ny 500m amin'ny lalana.
Dinihina io iray amin'ireo fitsangatsanganana tsara indrindra eto an-tany eo amin'ny natiora eo afovoan'ny Alpine sy fiord scenery. The ny lalana mandeha dia efa ho 150 taona lasa izay ary ny fitsangatsangana malaza indrindra any Nouvelle Zélande. Rehefa mitaingina ny làlana ianao dia mahita ilay fahitana mahatalanjona an'ny tendrombohitra, ala, lohasaha ary glasy izay mitondra any amin'ny farany Milford Sound mahafinaritra. Ny làlana dia manarona riandrano isan-karazany ao anatin'izany ny riandrano avo indrindra any Nouvelle Zélande. Manomboka ny diany ianao rehefa avy miampita ny Farihin'i Te Anau amin'ny sambo, mandeha amin'ny tetezana miato, ary mandalo an-tendrombohitra mandra-pahatongan'ny farany amin'ny faritry ny Sandfly Milford.
Fampitandremana ara-drariny, ny fiakarana ny Mackinnon Pass dia tsy natao ho an'ireo malemy saina, mety ho feno fanamby ary mitaky fahasalamana tsara.
Satria malaza be ny dia, dia mila manao famandrihana mandroso ianao mba tsy ho diso anjara amin'ny fotoana farany. Satria ny toe-piainana ara-toetrandro dia mametra ny iray tsy handeha amin'ny dia amin'ny fotoana rehetra, ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia faran'ny volana oktobra hatramin'ny faran'ny aprily.
Izy io dia 2 ora 20 minitra avy eo Queenstown hahatongavana any ary fiara 20 minitra fotsiny avy eo Te Anau.
60km (loop loop), 3-4 andro, Manelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano bongo telo any an-toerana / toby roa
Ny fitsangatsanganana dia loopika eo anelanelan'ny tendrombohitra Kepler ary afaka jerena ihany koa ny farihy Manapouri sy Te Anau amin'ity dia ity. Ny tanin'ity lalana ity dia mifindra avy amin'ny lakeshores mankany an-tampon'ny tendrombohitra. Ireo lava-bato glowworm akaikin'ny Luxmore Hut sy ny Iris Burn Falls dia toerana malaza vahinin'ny mpizahatany. Manome anao koa ity fitsangatsanganana ity fomba fijery mahafinaritra an'ny ny lohasaha misy glasy ary ny tany mando any Fiordland. Natao ho azy ireo ny làlana mba hahazoana antoka fa izay mandehandeha dia afaka manararaotra an'io fitsangatsanganana io hatrany amin'ny fahitana ny tendrombohitra avo hatrany amin'ny ala beech sy ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fiainam-borona.
Voafetra ihany koa io làlana io amin'ny toetr'andro ary noho izany ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia avy faran'ny volana oktobra hatramin'ny faran'ny aprily. Mandeha adiny roa mankany ianao avy eto Queenstown ary dimy minitra avy eo Te Anau.
Ilay tetezana swing swing eo amin'ny Kepler Track
10. Raikura track
32km (loop loop), 3 andro, Mpanelanelana
Fonenana - Mijanona ao amin'ny trano fonenana roa misy valiny / toby telo.
Ity làlana ity dia tsy an'ny nosy. Izany dia amin'ny Nosy Stewart eo akaikin'ny moron'ny nosy atsimo. Ireo nosy dia fonenan'ny vorona maro be ary toerana tsara indrindra hijerena vorona. Satria mitokana ny Nosy, ny natiora no tompon'andraikitra ary ny olombelona kosa tsy voakitika. Azonao atao ny mandeha mamaky ny morontsiraka misy fasika volamena ary mamakivaky ala mikitroka mandritra ny fitsangatsanganana. Azo atao ny mandeha an-tongotra mandritra ny taona.
Raha mitady handeha ianao, miaina amin'ny natiora, ary miaina ny fahasamihafana ara-pahasalamana sy isan-karazany atolotry ny planetantsika. Ny fitsangatsanganana tsirairay ao amin'ity bilaogy ity dia tokony ho ao anaty lisitry ny siny ary tokony ho entinao ny mamaha azy rehetra!
Alao antoka fa voamarinao ny fahazoana mandray anjara amin'ny eTA New Zealand anao. Raha avy amin'ny a ianao Firenena Visa Waiver avy eo azonao atao ny mangataka eTA na inona na inona ny fomba fitetezam-paritany (Air / Cruise). Olom-pirenena Etazonia, Teratany Kanadiana, Teratany Alemanina, ary Olom-pirenena anglisy afaka mangataka amin'ny Internet ho an'ny New Zealand eTA. Ny mponin'i United Kingdom dia afaka mijanona ao amin'ny eTA New Zealand mandritra ny 6 volana raha ny hafa kosa mandritra ny 90 andro. Taratasy fangatahana visa any Nouvelle Zélande dia vitan'ny ankamaroan'ny mpangataka ao anatin'ny telo minitra.